Duufaano baraf oo laga digayo | Somaliska
Hay'ada la socodka cimilada Sweden (SMHI) ayaa ka digaysa duufaano baraf wata oo ku soo fool leh inta badan Sweden maalmaha soo socda. Barafka ayaa la filayaa in uu intiisa badan ku dhufto gobalada Kalmar, Jönköping, and Kroneberg ka bilaabata caawa oo talaado ah ayadoo la filayo in uu saameeyo gobolada kale sida Stockholm iyo guud ahaan koonfurta Sweden wixii lo gaaro arbacada. SMHI ayaa digniinteeda ku cabirtay nuuca 2 taasoo macnaheedu yahay in dufaamaha ay qatar galin karaan nolosha dadka iyo guryaha. Qabowga iyo baraf ayaa la filayaa in ay sii socdaan ilaa isbuuca soo socda ayadoo inta badan ay cimiladu ugu yaraan taagnaan doonto -5C. Hay'ada Isku socodka (Trafikverket) ayaa ka digtay in ay foojignaadaan wadayaasha baabuurta oo ay guryahooda joogaan haddii aysan muhiim ahayn in ay baxaan, sidoo kale tareenada ayaa laga yaabaa in ay saameyso duufaanta.
Hay’ada la socodka cimilada Sweden (SMHI) ayaa ka digaysa duufaano baraf wata oo ku soo fool leh inta badan Sweden maalmaha soo socda. Barafka ayaa la filayaa in uu intiisa badan ku dhufto gobalada Kalmar, Jönköping, and Kroneberg ka bilaabata caawa oo talaado ah ayadoo la filayo in uu saameeyo gobolada kale sida Stockholm iyo guud ahaan koonfurta Sweden wixii lo gaaro arbacada.
SMHI ayaa digniinteeda ku cabirtay nuuca 2 taasoo macnaheedu yahay in dufaamaha ay qatar galin karaan nolosha dadka iyo guryaha.
Qabowga iyo baraf ayaa la filayaa in ay sii socdaan ilaa isbuuca soo socda ayadoo inta badan ay cimiladu ugu yaraan taagnaan doonto -5C.
Hay’ada Isku socodka (Trafikverket) ayaa ka digtay in ay foojignaadaan wadayaasha baabuurta oo ay guryahooda joogaan haddii aysan muhiim ahayn in ay baxaan, sidoo kale tareenada ayaa laga yaabaa in ay saameyso duufaanta.